Mareykanka oo sheegay in uu kordhinayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Mareykanka oo sheegay in uu kordhinayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay la murugooneyso shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed oo maanta u baroordiiqaya xuska 14-kii Oktoobar 2017 oo dad aan waxba galabsan oo Shacab ahaa ay ku dhinteen.
Safaaradu waxay sheegtay in dowaladda Mareykanka la xanuunsaneyso qoysaska dadkii qaraxaasi lagu laayay isla markaana ay ku garab taagan tahay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dhammaan saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa maanta umadda Soomaaliyeed la qeybsanaya xusuusta xanuunkii 14-kii Oktoobar 2017 oo ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhaca qaarada Afrika.
Qarixii Soobe ee 14-kii Oktoobar ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 587 qof wuxuuna ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Afrika oo loo adeegsaday walxaha qarxa ee macmalka ah (IEDs). Boqolaal kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa.
Previous articleWeerar Askar lagu dilay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Next articleRW Rooble oo Muqdisho kaga dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab